Rullaluistemadka PU xumbo jumlo ah oo lagu dhejiyay Stage, Spiky Ball Massage, Soo-saaraha Maskaxda Cadka ee Deep iyo Soo-saaraha Meibaoli
PU xumbo rullaluistemadka Set la Massage ul, Spiky Massage Ball, Deep Cadka Ball Massager
(1)Maxaad u dooratay setkeena nambarka xumbada? Qalabkayaga duugista duugista & kubbadda la dhigay ayaa laga sameeyay ECO-Friendly & High density cufan Polyurethane. Waxay leedahay faa iidada Nontoxic, waqtiga nolosha oo dheer iyo jilicsan laakiin ka taageero badan xumbada kale.(2)QAADASHADA XAQIIQADA UGU DANBAYSAN SET – Qalabka kaliya ee rooga xumbada leh oo ay ku jiraan 17” cufnaanta sare, roobaadka xumbada adag ee la balaariyay iyo usha duugista, kubad duugista unugyada qoto dheer. Dhammaantood waxay ku wada dhammaanayaan hal cayaaryahanno halis ah, kuwa jecel yoga iyo daaweeyeyaasha duugista.
Magaca Product: Yoga Layliyo PU xumbo Set Set
Waxyaabaha: Xumbo PU
Midabka: Loo habeeyay
Cabir: PU rullaluistemadka xumbo – 17 ''
PU xumbo ul rullaluistemadka – 12 ''
PU xumbo kubad duugista dhibic – 3.5 ``
Goobta Asalka: Shandong, Shiinaha (Dhul Weyn)
Waqti Sample: 3-5 Maalmaha Shaqada
(1) Maxaad u dooratay xirmooyinkayaga xumbada? Qalabkayaga duugista duugista & kubbadda la dhigay ayaa laga sameeyay ECO-Friendly & High density cufan Polyurethane. Waxay leedahay faa iidada Nontoxic, waqtiga nolosha oo dheer iyo jilicsan laakiin ka taageero badan xumbada kale.
(2) SAMEEYNTA XAQO XUMEYNTA SET - Koobka kaliya ee rullaluistemadka xayeysiinta ah oo ay ku jiraan 17 ”cufnaan sare, shirkad dheeri ah oo xumbada la ballaariyay iyo usha duugista, kubad duugista unugyada qoto dheer. Dhammaantood waxay ku wada dhammaanayaan hal cayaaryahanno halis ah, kuwa jecel yoga iyo daaweeyeyaasha duugista.
(3) KU HABOON TARANKA- Qalabka Ultimate Foam Roller wuxuu u fiican yahay qofkasta oo socda. Si fudud u dheji qoriga rullaluistemadka iyo kubbadda duugista tuubada Dhexe ee rullaluistemadka Xumbada, ku xir daboolka, ku tuur boorsada shandadaada una isticmaal waqti kasta, meel kasta.
(4) KA HORTAGGA DHIBAATADA MURUQA - Waxay kufiican tahay dejinta, dheelitirka, dib u dhiska muruqyada iyo muruqyada, xasilinta laf-dhabarka, wacyiga jirka iyo isuduwidda, iyo xoojinta howlaha. Qalabkani wuxuu ku fiican yahay daaweynta jireed, daaweynta duugista, dhaqan celinta, kahor iyo kadib jimicsiga kuleylka iyo hoos u dhaca diiran, iyo yoga. Muruqyada xumbada xumbada waxay ka caawisaa inay yareeyaan murqaha murugada ayna kordhiyaan falcelinta muruqyada.
(5) LOO BADBAADIYAY IN LAGU Kordhiyo waxqabadka - Mid ka mid ah aaladaha soo kabashada ugu fiican ee lagu daaweeyo murqaha xanuunka iyo kordhinta waxqabadka iyo dabacsanaanta. Is rogrogidda jimicsiga kahor iyo kadib waa qeyb ka mid ah waxqabadyada fidinta ee weyn. Waxay kordhisaa qulqulka dhiigga ee goobta duugista, kana fogeysaa aashitada lactic kaydsan kubbadda kororka leh. Iska yaree qallafsanaanta iyo xanuunka kahor iyo kadib jimicsiga, jimicsiga, orodka iyo tababarka muruqyada qotada dheer ee duugista kubbadda adag.
Wareegtada Xumbo Wareega Wareega
Ku Fiican Daaweynta iyo Jimicsiga: Waxay ku fiican tahay diirimaad, qabow iyo soo kabasho. Waxay kaa caawineysaa inaad fududeyso xanuunka iyo qallafsanaanta, waxay yareyneysaa waqtiga soo kabashada, waxay ka fogaaneysaa dhaawaca, waxayna hagaajineysaa dhaqdhaqaaqa kala duwan iyada oo loo sii daayo Deep Myofascial Release (cadaadis ku saarida qodobbada gaarka ah ee jirka)
Ka tirtir dhibcaha kicinta iyo murqaha muruqyada.
Diirimaad kahor jimicsiga si looga hortago dhaawacyada.
Iska yaree xanuunka iyo xanuunka jirdhiska.
Kordhi wareegga jirkaaga. Ku habboon daaweynta xanuunka guriga.
Kubad duugista dhibic kicisa
Aad ayey ugu fiican tahay ka saarista guntimaha iyo barta kicinta ee muruqyada oo la jilciyo Qiyaasta hareeraha kubbadda, kaas oo xakameyn kara dhaqdhaqaaqiisa, si gaar ah marka aad rogrogto, Waxay bartilmaameedsan kartaa aagagga waaweyn ee jirkaaga.
Hore: PU xumbo kiciya Points Myofascial Release Fitness Massage Ball
Xiga: PU xumbo rullaluistemadka Set la Massage ul, Spiky Massage Ball, Deep Cadka Ball Massager
PU xumbo kiciya Points Myofascial Release Fitne ...
PU xumbo rullaluistemadka Calan ul Massage, Spiky Ma ...